Covid Booster Shots Archives - Harley Street Clinic Fitsaboana manokana any London
Last updated on August 18, 2021 By Clinic Harley Street
Tifitra booster Covid – Ny ahiahy eran'izao tontolo izao momba ny tsimatimanota maharitra sy ny variana Covid19 vaovao dia naharesy lahatra firenena sasany hametraka Cotsid Booster Shots.
Misy lisitra mitombo an'ny Covid19 miovaova, vao haingana ny karazana Delta izay nanaparitaka izao tontolo izao.
Ahiana ny areti-mifindra sy mampidi-doza kokoa noho ny virus Covid19 tany am-boalohany.
Ny ankamaroan'ny olona ahiana dia efa nahazo vaksinin'ny vaksiny roa ary voaaro tanteraka.
Manoro hevitra ny NHS UK fa izay programa mety hampiroborobo rehetra dia tokony hanomboka amin'ny volana septambra 2021.
Izany dia hampitombo ny fiarovana amin'ny olona mora tohin'ny COVID-19 matotra mialoha ny ririnina.
voan'ny gripa / Matetika ny vaksinin'ny influenza dia aterina amin'ny fararano.
ny NHS considers that, raha azo atao, ny fomba fiasa miaraka amin'ny fizarana vaksinin'ny COVID-19 sy ny gripa dia afaka manohana ny fanaterana ary manatsara ny fandraisana ireo vaksinina roa tonta.
Azo inoana fa ny 50-taona mahery sy ireo tandindomin-doza dia homena booster amin'ny fotoana mitovy amin'ny jab flu, miaraka amin'ny fandaharana andrasana hanombohana amin'ny voalohan'ny volana septambra.
Data avy amin'ny Health Public England milaza ny vaksinin'ny Pfizer / BioNTech dia 96% mandaitra ary ny vaksinin'ny Oxford / AstraZeneca dia 92% mandaitra amin'ny fidirana hopitaly aorian'ny fatra roa.
Betsaka ny Harley Street Clinics no toa manolotra ireo jab mitambatra hanampiana ny fanampiana ny jab Covid Booster jab – mba lazao eto ny fahaliananao.
Formulir ho an'ny vaksinin'ny Covid19 tsy miankina